NYI LYNN SECK 18+ DEN: ဘယ်သူ့အလွန်လဲ
Posted by NLS at 5/22/2010 09:02:00 AM
46 Responses to “ဘယ်သူ့အလွန်လဲ”
2 ယောက်စလုံး အလွန်လို့ ထင်တာပဲ...ဒါပေမယ့် ထက်ထက်မိုးဦး က စကားနဲ့ စပြီးစော်ကားခံရတယ်...သူ လက်ပါ သွားတာကတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ သူ့ ဒေါသက ကိုညီလင်းဆက် ပြောသလို အဲ့ဒီ ဂျာနယ် ၊ သတင်းထောက်နဲ့ မဆက်ဆံရုံလောက်နဲ့ ပြေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ... ဘာမှ မလုပ်ရင်လဲ ... သူတို့ စကားနဲ့စော်ကားသမျှကို ငြိမ်ပြီးခံလိုက်ရသလိုဖြစ်သွားမယ်။ ထက်ထက်မိုးဦး ကိုတော့ သနားမိတယ်။
သတင်းထောက်ကလဲ ... တမင် ညစ်ပြီး မေးတာ မဟုတ်ဘူး အမေး မတတ်လို့ ဖြစ်သွားတာဆိုရင်တော့ စိတ်မကောင်းစရာပဲ..ဒါပေမယ့် သိရက်နဲ့ တမင် ညစ်ပြီးမေးတယ်ဆိုရင်တော့...အမြင်ကတ်ဖို့ကောင်းတယ်။
သူတို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် ကိုယ် စဉ်းစားမိတယ်။
ပြသနာကို စတဲ့သူက မှားတယ်။ မှားတဲ့သူ နိုင်လိမ့်မည် ထင်သည်.......:P
မြန်မာပြည်က စာနယ်ဇင်းတွေ လောကမှာ ဖြစ်နေတာတော့မပြောတော့ပါဘူး......
ဆရာကြီးလူထုဦးစိန်ဝင်းကပြောသွားဖူးပါတယ်....စာနယ်ဇင်းနယ်ပယ်ကလူတွေ စာများများဖတ်ပြီး စည်းရှိကြဖို့ ပါ...
ဒါပေမယ့်အခုကိစ္စမှာ လွန်တာက နှစ်ဦးလုံးဆိုပေမယ့်...ဂျာနယ်တွေအကုန်လုံးက မင်းသမီးလွန်တယ်ဆိုပီးပဲ တဖက်သတ်ရေးနေတာတော့မကောင်းပါဘူး.....
အင်တာဗျုးဖတ်ကြည့်ရသလောက် ဆိုရင် စာနယ်ဇင်း တွေလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ သင့်ပါပီ..
အခုကိစ္စကိုကြည့်ပြီး လူတွေလည်း ရွေးကောက်ပွဲထက် Celebritiy ကိစ္စ ကို ပိုစိတ်ဝင်စားသလို ....စာနယ်ဇင်းတွေလည်း ရွေးကောက်ပွဲထက် Celebrity ကိစ္စကိုဖွပြီး ဂျာနယ်ရောင်းကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ ကိုတက်ကြွနေကြပုံရပါတယ်..
PS. ယခုထိ စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်ကိုသေချာစောင့်စည်းနေသေးသော ဂျာနယ် ၃ ၄ခုကိုတော့ လေးစားနေပါသေးကြောင်း
သူ့ မေးခွန်းတွေက Personal တွေလေ...မမေးသင့်တာတွေ
နှစ်ဖက်လုံးမှားပေမယ့် စာနယ်ဇင်းသမား၊ သတင်းထောက်သမားကလည်း လေးစားမှု (လုံးဝ) မရှိသလို... တစ်ဖက်က မင်းသမီးကလည်း မှားခဲ့ပါတယ်....။ အရင်တုန်းက ထက်ထက်ရဲ့ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေထားခဲ့တာတွေကြည့်ရင် သူ့အနေနဲ့ အင်တာဗျူးတွေကို ပညာသားပါပါ ဖြေတတ်ခဲ့ပါတယ်..။ ခုကိစ္စက သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေက လျော့နည်းလာမှုအပေါ် ခံစားချက်ဖြစ်နေတာရော၊ အခြားအခြားပေါ့...စိတ်အခြေအနေက ပေါက်ကွဲချင်တဲ့အခံတစ်ခု ၀င်နေတာကြောင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ဖြစ်ခဲ့တာပါ..။ သို့ပေမယ့် မေးခွန်းထုတ်စရာတစ်ခုက interviewer တွေကရော ဘယ်လောက် အဆင့်အတန်းရှိလာပါသလဲဆိုတာပါ...။ ထိရင်တော့ နာတတ်ကြပေမယ့် အထိမခံနိုင်အောင်လည်း တန်ရဲ့လားဆိုတာက တွေးဖို့လိုပါတယ်....။ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မှုလို့ တစ်စာစာအော်နေကြပေမယ့် ဘောင်ထဲကနေ ခိုးယူမှုတွေကရော??? ဘလော့တွေ ပေါ်လာတော့ သူတစ်လူ ငါတစ်မင်း နေရာကိုယ်စီမှာ နာမည်ကိုယ်စီရလာကြပေမယ့် generation တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာ တော်လာတဲ့သူတွေ ပေါ်လာပေမယ့် စိတ်ဓါတ်ပိုင်းမှာတော့ ပြည့်လာခဲ့တဲ့သူတွေ အများကြီးလိုပါသေးတယ်...။ ဒီလို ပရိတ်သတ်အချစ်တော် အနုပညာရှင်တွေကိုမေးခဲ့တဲ့ ကိုကိုလှမြင့်ရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ချို့ကို အမှတ်ရမိပါတယ်...။
ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရင်စော်ကားသူက စမှားတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ နာမည်ကောင်း ယူတတ်သူအတွက်ကတော့ လုပ်ကွက်ပေါ့လေ။ ကျနော် အမြင် တစ်ခုကတော့ ဂျာနယ်လစ်တွေ အားလုံးစုပြီး နောက်ပိုင်း ဒါမျိုး မဖြစ်အောင် သူတို့ကိုယ် သူတို့ ကာကွယ် လိုက်တာလို့ မြင်တယ်။ တကယ်လို့ မထက်သာ အရင်လို တောက်ပနေတဲ့ အချိန်ဆိုရင် ဘယ်လွယ်လိမ့်မလဲ။ မထက် မှန်တယ် လို့ မပြောလိုပေမဲ့ သူ့နေရာ ကိုယ်သာဆို ဒီထက် ဆိုးမယ်။
အင်တာဗျူး ဖတ်ရတဲ့လူတောင် ထက်ထက်မိုးဦးက ကြိုးစားဖြေနေတာကို အဆင်ပြေပြေဖြေပေးပါ ပြောကတည်းက စာမေးပွဲ စစ်နေသလားလို့ ရွဲ့မေးချင်စိတ် ပေါက်ပါတယ်။
သူမေးတာတွေကလည်း... ကျန်းမရေးမကောင်းကြောင်း၊ ကလေးပျက်တဲ့အကြောင်း၊ အိမ်ထောင်ကွဲတဲ့အကြောင်း.... ထက်ထက်မိုးဦးက အဲ့ဒီ အင်တာဗျူးပြီးရင် အလုပ်ရှိရာ တန်းသွားရမှာ သူလည်းသိနေတာကို စိတ်ညစ်အောင် သွားလုပ်စရာလား။ မေးတဲ့အစ်မကြီးက လူမှုရေး တော်တော် နားမလည်တာပဲ။
သရုပ်ဆောင်တွေဘက်က မေးမြန်းတဲ့သူတွေအပေါ် သည်းခံနေရတာ ကြာလှပါပြီ။ ဟိုး ၂၀၀၀ ဝန်းကျင်လောက်က ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် ကို ဘာလို့ ကလေးမယူသေးတာလဲ လို့ မေးခွန်းထုတ်ကတည်းက အင်တာဗျူးဆို စိတ်ကိုညစ်နေတာ။
ပြီးတော့ ခု အင်တာဗျူးနေချိန်မှာ ထက်ထက်မိုးဦးက တစ်ယောက်ထဲ မေးတဲ့သူဘက်က ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူ(အမျိုးသားတစ်ယောက်)နဲ့ တခြားအဖော်တွေ ပါပါသေးတယ်။ ရင်းနှီးသူချင်းတောင် မပြောချင်တဲ့ကိစ္စကို သူစိမ်းရှေ့ မေးခံရတဲ့အခါ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ...
ခံစားမှုတွေကို စကားလုံးနဲ့ မဖြေချင်တော့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးက သူဘယ်လိုခံစားနေရတယ် ဆိုတာကို လက်တွေ့သရုပ်ပြလိုက်တာလို့ မြင်ပါတယ်။ မီဒီယာက မှားတယ်မှန်တယ် အော်နေတာကနောက်၊ အရိုက်ခံရတာက အရင်။ ဒီတော့ တစ်ခါလောက် ခံဖူးတယ်ရှိမှ နောက်ဆို အမေးအမြန်း ဆင်ခြင်ကြမှာပါ။
ထက်ထက်မိုးဦး အနေနဲ့ကတော့ အရှက်ခွဲချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးနေမှတော့ အရှက်အကွဲခံပြီး တကယ်ကို ရိုက်ပစ်လိုက်တာပဲလို့ မြင်ပါတယ်။
အထောင်းခံပြီး အလျော်ယူတယ် ဆိုတဲ့ ဗမာစကားလဲ အရှိသားဘဲ။ ထောင်းလောက်အောင် ဆွခံရဖူးရင် ကိုယ်ချင်းစာကြမှာပါ။
ကျမအထင်တော့ စာနယ်ဇင်းသူမက မှားတာလို့ ထင်ပါတယ်။
ထက်ထက်က မဖြစ်မနေမို့ တုန့်ပြန်လိုက်ရတယ် ... တဲ့။
ဒါက ဒီမိုကရေစီတောင် ရသေးတာ မဟုတ်ဘူး သတင်းထောက်တွေ စာနယ်ဇင်းသမားတွေက စည်းကျော်ချင်နေပြီ။ ၁၉၆၂ မတိုင်ခင်တုံးကလဲ အဲလိုတွေ ရှိခဲ့ ဘူးတယ်လို့သိရတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီ ဂျာနယ်တိုက်ပါ ပိတ်ပြစ်ရမယ်။ သူတို့ လူမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေက နိမ့်လွန်းပြီး intrusive ဖြစ်လွန်းတယ်။
ထက်ထက်မိုးဦးက သူ့ကိုလူမသိ သူမသိစော်ကားခံနေရတာတွေများလာတော့ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ သူကျော်ကြားတုန်းကသူ့နားဝိုင်းပင့်ပြီး စီးပွားဖြစ်နေတဲ့သူတွေက အခုသူ့ကိုစော်ကားနေပါတယ်လို့အများသိအောင် လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်မယ်... လက်ပါမှလဲတိုင်းသိပြည်သိဖြစ်မယ်လို့ သူယူဆလို့ မဖြစ်မနေလုပ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်.... အဲဒီမေးတဲ့လူကလဲ လူမှုရေးနားမလည် ပါးပါးနပ်နပ်မရှိတော့ မြေဇာပင်ဖြစ်သွားတာပေါ့...။
အပေးနဲ့အယူပါပဲ၊ ဖတ်ချင်တဲ့သူ မရှိပဲနဲ့တော့ မီဒီယာတွေက အဲဒါတွေ လိုက်မဗျူးဘူး။
ဒီထက်ဆိုးတဲ့ အရေမရ အဖတ်မရ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မေးခွန်းတွေကို ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ဖြေတတ်ဖို့က အနုပညာသမားရဲ့ ပညာတစ်ခု (သို့မဟုတ် အနုပညာသည်တိုင်းမှာ သင့်တင့်တဲ့ EQ ရှိရမယ်) လို့ ထင်တာပဲ၊ မဖြေချင်ရင် တခြားနည်းနဲ့ ရှောင်လို့ရပါတယ်၊ မီဒီယာက ဘယ်လိုပဲပြောပြော အနုပညာသည်တွေပေါ် ကျေးဇူးရှိတယ်။ အဖြစ်အပျက်က ဘယ်ကပဲ စစ၊ နောက်ဆုံး လူတွေပါးစပ်ဖျားမှာ ကျန်ခဲ့တာက မင်းသမီး ဘယ်သူဘယ်ဝါက သတင်းထောက်ကို ပါးရိုက်လိုက်တယ် ဆိုတာပဲ၊ ဒါကို လက်မခံလို့ကို မရဘူး။
ကိုညီလင်းဆက် ပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်..
နှစ်ယောက်စလုံး အလွန်လို့ ထင်တာပဲ.
စာနယ်ဇင်း သတင်းထောက်ဟာ ဂျာနယ်လစ်ဇင် အက်သစ်တော့ ရှိဖို့လိုတယ်ထင်ပါတယ်။
privacy ထိခိုက်စေနိုင်မယ့် အကြောင်းအရာမျိုး ရေးသင့်လား။
ထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းအရာတိုင်း ရေးသင့်သလား။
အဲဒီအချက်တွေကို ရေးသင့်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်မယ်ကြံတိုင်း ethic နဲ့ ချိန်ထိုး စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
စဉ်းစားလို့ conflict ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ethic ကို ဦးစားပေးရမှာပါ။
မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတိုင်းဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေ၊ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ လူမှုရေး စတာတွေကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်။ ဟောလိဝုဒ်တို့ ဘာတို့ နဲ့ ယှဉ်စရာလဲ မလိုပါဘူး။
မြန်မာစာနယ်ဇင်းသမားတွေ စာတတ်ဖို့ အများကြီးလိုသေးတယ်လို့ ထင်တာပါပဲ။
စာနယ်ဇင်းအမျိုးသမီးက ပါးရိုက်လိုက်တာကမှ တော်ဦးမယ် ဒီလို စ်ိတ်နှလုံးကို စော်ကားတာကတော့ ပါးရိုက်တာထက်ကို နာမှာပဲ
ထက်ထက်မိုးဦးကို မကြိုက်ခဲ့ပေမယ့် တကယ် ကိုယ်ချင်းစာတယ် တချို့စကားက အရိုက်ခံရတာထက်နာတယ်... ဒါတွေကို နားလည်စေချင်တယ်
မောင်းထုတ်လိုက်တာအထိတော့မှန်ပါတယ် ဒီလို လူမျိုးကို ဒီလိုပဲ လုပ်ရမှာပဲ အနုပညာရှင်မှာလည်း လူမသိစေချင်တဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတော့ ရှိမှာပဲ ဒါတွေကိုတော့ နားလည်ရမယ် တရားရေးအထိ ရောက်စရာ အကြောင်းတော့ မရှိဘူးလို့ မြင်တယ် ဂျာနယ်တွေကလည်း နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးနဲ့ ဖြစ်တာဆိုတော့ သတင်းကောင်း သတင်းထူးလို့ ယူဆပုံရတယ် ဘာပဲ ပြောပြော သာမန်သတင်းထောက်လေးကတော့ နိုင်ငံကျော်သွားတာပေါ့
ထက်ထက် နေရာ ကိုယ်သာဆို ဒီထက် ဆိုးမယ်။
ဖတ်ရတာ အရမ်းပဲ စိတ်လဲမကောင်း ဒေါလဲကန်မိပါတယ်...အကယ်၍ ထက်ထက်သာ အဲဒီနေ့မှာ ပါးမရိုက်လိုက်ပဲ ဒီအမျိုးသမီးကို ဒီအတိုင်းလွှတ်ပေးလိုက်ရင်လဲ ဂျာနယ်မှာ ထက်ထက်က ကောင်းစွာဖြေဆိုလိုတဲ့ ပုံစံမရှိဆိုတဲ့ အာဘော်မျိုး နဲ့ ဖော်ပြဦးမှာပါပဲ...
ထက်ထက်အနေနဲ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက်မစော်ကားပဲနဲ့ သီးခံလိုက်ရင်လဲ ဂုဏ်သိက္ခာကို စော်ကားတယ်ဆိုပြီး ဒီအမျိုးသမီးကို တရားစွဲဖို့ ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး... ဒါဆိုလဲ အဲဒီဂျာနယ်တွေက ထက်ထက်က အနာပေါ် တုတ်ကျလို့ နာတယ် ဆိုပြီး ရေးကြဦးမှာပါပဲ... ဒီကိစ္စမှာ ထက်ထက် ဒီလိုလုပ်လိုက်တာ မှန်တယ်လို့ မပြောလိုပါဘူး... ဘာမှမလုပ်လိုက်ပဲ လူမသိ သူမသိ အမေးခံရတဲ့ လူက စော်ကားခံရပြီး ပြီးသွားခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးတွေလဲ ဒုနဲ့ ဒေး ရှိနေမှာပါပဲ။ ထက်ထက်ဒီလိုလုပ်လိုက်မှသာ စာနယ်ဇင်းတွေက မခံမရပ်နိုင်ထဖြစ်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် တရားရင်ဆိုင်ကြရင်လဲ ၂ ဖက်လုံးကို အရှိကို အရှိအတိုင်း အမှန်တိုင်း ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး အင်တာဗျူးတဲ့မမကိုလဲ အပြစ်ရှိရင် အပြစ်ရှိကြောင်း မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်ပေးမှသာ နောက်ကို ဂျာနယ်တွေက ဒီလို လက်လွတ်စပယ် စည်းလွတ်ဝါးလွတ် မမေးရဲ မရေးရဲကြမှာပါ... ထက်ထက်ကတော့ အားလုံးအတွက်ရင်းလိုက်ရတဲ့ သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့...
ထက်ထက် ခရေဇီတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ထက်ထက်နေရာမှာ သူကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ရော ဘယ်လို တုံ့ပြန်မှာလဲလို့ ဒီအမျိုးသမီးကို စာနယ်ဇင်းဆရာတွေ မေးကြည့်စေချင်တယ်... မင်းသမီးမို့လို့ မေးတိုင်းအကုန်လုံးကို ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက် ယဉ်သဉ်ကျေးကျေး ဖြေရမယ်လို့ ရှိပါသလား... အင်တာဗျူးတဲ့ လူတွေကရော ယဉ်ကျေးမှု ရှိစရာမလိုဘူးလားလို့ မေးစရာ ဖြစ်နေပါပြီ...
အားလုံးကို အမှန်အတိုင်း ဖြစ်စေချင်ပါတယ်... မြန်မာ့ စာနယ်ဇင်းတွေ အနေနဲ့ ပရိတ်သတ်ပေးရတဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ရသကို ပေးနိုင်တဲ့ စာနယ်ဇင်းအဖြစ်ပဲ ပြန်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်.. အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာသည်တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေကို ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ထင်အောင် လျောက်ရေးပြီး ပရိတ်သတ် ပိုက်ဆံညာယူနေတာတွေ ရပ်တန်းကရပ်စေချင်ပါပြီ..ငါ့စာမူရရင်ပါရင်ပြီးရော၊ စာမူခရရင်ပြီးရော၊ နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ အင်တာဗျူးပါလို့ ဂျာနယ် စောင်ရေတက်ရင် ပြီးရောမျိုးတွေ မလုပ်သင့်တော့ပါဘူး။
ဂျာနယ်တွေရဲ့ အာဘော်တွေပဲရပြီး လောင်းရိပ်မိနေတဲ့ အင်တာနက်မသုံးတဲ့ မြန်မာပရိတ်သတ် အတွက် ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ ဒီပို့စ်ကိုရော http://www.myanmarthway.co.cc/2010/05/blog-post_6599.html က ပို့စ်ကိုရော ဂျာနယ်တွေမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်သူပိုင် သတင်းစာကနေဖြစ်ဖြစ် ဖော်ပြလို့ရရင် ဖော်ပြစေချင်တယ်...ဒါမှလဲ ပြည်တွင်းက ဂျာနယ်တခုထဲကို မှီခိုပြီး ဖတ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ဂျာနယ်တွေရဲ့ အာဘော်ကို မမိတော့ပဲ နောက်ဆို ဂျာနယ်ထွက်တိုင်း ဝယ်သင့်မဝယ်သင့်၊ ယုံသင့် မယုံသင့် စဉ်းစားရင်း သာမန်အခြေခံလူတန်းစားအတွက် ဂျာနယ်တစ်စောင်ဝယ်မယ့် ပိုက်ဆံဟာ ကလေးကျောင်းမုန့်ဖိုး သို့မဟုတ် ကလေးတယောက်အတွက် အာဟာရ ပြည့်ဝတဲ့ Breakfast တနပ်စာ အသုံးပြုလို့ ရသွားမှာပါ....
လျှာရှည်တာတွေ နဲနဲများသွားတယ်... ဆောတီး ကိုညီလင်းဆက်... သင်္ကြန်ဗုံးပေါက်တဲ့ကိစ္စထက် ဆိုးနေပြီ... ပို့စ်ထက် comment က ပိုရှည်သွားတယ်... သင်္ကြန်ဗုံးပေါက်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ comment လုံးဝမပေးခဲ့ဖူးပါလို့ ဝန်ခံပါရစေ....
Both လို့ Vote ခဲ့ပါတယ်....
မြန်မာပြည်က စာနယ်ဇင်းတွေ လူထုကို အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရဖို့ထက် အခုလို နာမည်ကျော်တို့ကို ခုတုံးလုပ် အညှီအနံ့ အတွင်းရေးလေးတွေ အတင်းနှိုက်ပြီး လူထုကို မြူဆွယ်ဖြားယောင်းနေတဲ့ အဆင့်သာ ရှိကြောင်း ပြည်သိကမ္ဘာသိ ဖြစ်သွားပါတယ်။ တလက်စထဲ မြန်မာပြည်က လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်နေသူ၊ အောင်မြင်ခဲ့သူတွေထဲမှာ ဒီလို အကြမ်းဖက် တုန့်ပြန်တတ်တဲ့ သူမျိုးတွေ၊ ဒေါသ အလျောက် အထိန်းကွပ်မဲ့ ပြုမူတတ်တဲ့ လူမျိုးလည်း ရှိတယ် ဆိုတာကို ဖေါ်ပြပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ လူမှု အဖွဲ့စည်း ထဲမှာ ဒါမျိုးတွေ ဒါမျိုးတွေ ပြင်ဖို့ ပြောင်းလဲဖို့ တိုးတက်ဖို့ အပုံကြီး လိုနေသေးတယ်ဆိုတာ ဖွင့်ဟ ပြလိုက်တာပါပဲ လို့ ထင်တယ်ဗျာ
အလိုက်မသိတဲ့ သတင်းထောက်နဲ့ မပါးနပ်တဲ့ မင်းသမီး
မင်းသမီးလဲ လူပဲဗျာ... ဒေါသကတော့ ရှိမှာပေါ့...
မရိုမသေ ခွေးတောင် ချောင်ပိတ်ရိုက်ရင် ပြန်ကိုက်သေးတာပဲဟာကို....
ဟို သတင်းထောက်မက ပွဲမဆူဆူအောင် မေးမှတော့ သူလဲပေါက်ကွဲခွင့်ရှိပါတယ်....
ဒါပေမယ့် လက်ပါသွားတဲ့အတွက်... ဥပဒေ အလိုအရ သူ့အမှားများဖြစ်သွားမလားမသိဘူး...
စိတ်ဒဏ်ရာကတော့ သူ့မှာလဲ ရသွားမှာပါ....
The questions asked by journalist made us so disappointed. We felt sympathy to htet htet because her son passed away lastafew months ago. All these questions lead to provoke htet htet's anger. The journalist did not change other question. She kept asking the same.I don't even know the journalist what she wanted to know from htet htet.
i think that it is because of htet htet's stress and anger can not control it coz of time being. She gotabit shy when that moment together with her current husband. The journalist should understand that when she would feel it when she was her position. But some time actors and actresses when they are not successful time they so good and patient on journalists. but when they became famous, their attitude change to opposite way.....
ကော်မန့်တွေကလည်းဗျာ... မီးလောင်ရာ လေပင့်မယ်ဆိုတာကြီးပဲ... ဒီကိစ်စမှာ သတင်းထောက်က စမှားတယ်လို့ ဆိုလို့ရပေမယ့် ထက်ထက်မှားတဲ့အမှားက သတင်းထောက်ထက်ပိုဆိုးတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး... ဒေါသကို မထိန်းပဲ ပြန်လုပ်မိလိုက်ရင် သူ့အမှားထက် ကိုယ့်အမှားကပိုကြီး ဖြစ်တတ်ပါတယ်... ၉၅ခုနှစ် အရှေ့တောင်အာရှဘောလုံးပွဲက မြန်မာဂိုးသမား အောင်ကျော်ကျော်နဲ့ ဗီယက်နမ်ရှေ့တန်းသမားရဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ဥပမာကြည့်ပါလေ
တစ်ကယ်တာဆိုရင် ထက်ထက်အနေနဲ့ ဦးနှောက်သာရှိမယ်ဆိုရင် ပါးရိုက်တာထက်နာအောင် ဒုတ်ခပေးလို့ရပါတယ်... သူ့ကို ဒီဂျာနယ်က ဒီသတင်းထောက်က ဒီလိုမစာမနာမေးသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ နောက်ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို ပြောလိုက်ရင် အဲ့ဒီ 7days ရော... သတင်းထောက်ရော... ဆံပင်စွဲ ပါးရိုက်တာထက် အဆပေါင်းများစွာ နာသွားမှာပါ... ဟော ပြည်သူတွေကလည်း သူတို့ရဲ့အချစ်တော် ထက်ထက်ကို ပြောရက်လေခြင်းဆိုပြီးတော့ ထက်ထက်ကို ပိုလို့တောင် ပိုချစ် ပိုအားပေး ဖြစ်ကြဦးမှာပါ။ လက်မပါပဲ ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ ကိစ်စပါ။
အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေကင်ပေတိုင်လည်း သိက်ခါကျ... ထက်ထက်လည်း ထိခိုက်... စာနယ်ဇင်းတွေလည်း အနာပေါ်ဒုတ်ကျ... ဂျာနယ်တိုက်နှစ်ခုကို ပိတ်လိုက်နိုင်တဲ့အထိတောင် ထက်ထက်က အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့လည်း (ကောလဟာလလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ... The Voice & Another one လို့ ပြောတယ်... မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေ ပိုသိမှာပါ) ဒီအမှုက ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာ မှန်းလို့ရပါတယ်လေ
မင်းသမီးရဲ့SEX CD ,လက်ထပ်ပြီးမင်းသမီးရဲ့ဇတ်လမ်းတွေ၊LIVING TOGETHER တွေ၊သူများယောကျာ်းကိုငှားသုံးတာဆိုတာတွေ၊အားလုံး
ချစ်သူကိုသာစေ၊မုန်းသူကိုနာစေလုပ်ပြီး MEDIA ဆိုတာတို့
စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်တို့ ကိုတွင်တွင်ပြောနေတာကတော့မကောင်းပါဘူး။MEDIA အားလုံးကို
မဆိုလိုပါ။STUPID QUESTION ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာလဲဖတ်မိပါ
ထက်ထက်မိုးဦး တုန့်ပြန်မှုက မှားသွားတယ်..
ဒါပင်မဲ့ သူအဲ့ဒီ့လိုမတုန့်ပြန်ရင်လဲ သူ့ကိုအရင်က သာဓကတွေလိုပဲ ကောင်းကောင်းဖြေမပေးဘူးဆိုပြီး တဖက်သတ် ကလောင်နဲ့ စော်ကားဦးမှာ ပဲလို့တွေးပြီး အလျင်စလိုဆုံးဖြတ်တုန့်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်မယ်... ဒေါသကိုရှေ့ထားလိုက်တော့ မှားသွားတာပေ့ါ..
ပြသာနာဖြစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ ဖြစ်သင့်တာက တချို့ စာနယ်ဇင်းသမားကြီးတွေက သမီးချင်း ကိုယ်ချင်းမစာ ထက်ထက်မိုးဦးကို ဖိနှိပ် ဝေဖန် နှိပ်ကွပ် မဲ့အစား နှစ်ဖက်စလုံး တယောက်ကို တယောက် လေးလေးနက်နက် တောင်းပန်းပြီးအဆုံးသတ်ဖို့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်..
ချစ်စကို ရှည်စေ မုန်းစကို တိုစေသင့်ပါတယ်..
ဒါပင်မဲ့ အခွင့်ရတုန်း ထက်ထက်မိုးဦးကို အကြောင်းပြုပြီး အနုပညာသမားတွေကို သတိမေးဝေဖန်လိုက်တဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားကြီးတွေကတော့ အသားလွတ်ဝင်ပြီး ကိုယ့်သိက္ခာ ကိုယ်ချသလိုဖြစ်သွားပါတယ်..
ဘယ်စာနယ်ဇင်းသမားက သမာသမတ်ရှိတယ်ဆိုတာလဲ ဒီအဖြစ်အပျက်ကနေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်
ကိုညီလင်းဆက် ရဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်မှုက ထိမိလှပါတယ်..
မြန်မာ့ စာနယ်ဇင်းလောကမှာ အရည်အချင်းပြည့်မှီတဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေလိုအပ်နေပြီဆိုတာ တချို့ စာနယ်ဇင်းတွေ သိသွားသင့်ပါပြီ.. အကျိုးပြုလိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ပြောတာပါ...
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ နဲ့သဘောချင်းတူပါတယ်..ထက်ထက်မိုးဦးသာငြိမ်နေလိုက်ရင်လည်း ဒီလိုအပြောခံရတာ ဘယ်သူမှ သိလိုက်မှာတောင်မဟုတ်ဘဲ သူဘဲ စနေနံနဲ့စတဲ့မင်းသမီးလေးဟာ အင်တာဗျူးကောင်းကောင်းမဖြေဘူးဆိုပြီးပြောအုံးမှာဘဲ..
မေးတဲ့လူကလည်း ကိုယ်ချင်းမစာ..ကလေးပျက်ကျတာ ဘယ်လိုခံစားရလဲတဲ့...မပြောလိုက်ချင်တော့ပါဘူး..ဘာဘဲပြောပြော..မထက်ထက်က တကယ်ကိုမြေဇာပင်ဖြစ်သွားတာပါ။ သူ့ကိုလည်းသနားတယ်...ခံရတဲ့ မိန်းကလေးကိုလည်းသနားတယ်..ဟူး..ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲမသိဘူးနော်...
မထက်ထက်ကော ခံရတဲ့မိန်းကလေးကော မကောင်းသောကျော်ဇောခြင်းမှ ကင်းဝေးပါစေ။
ပရိတ်သတ်က မမိုးဟေကို ရဲ့ ဟိုဒုတိယကိတ်စကိုလည်း အတော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်..ဒါကျတော့ ဘာလို့များ ပရိတ်သတ်က ဒီဟာကိုအတော်ပြောနေကြပါတယ်..အမကောဘယ်လိုခံစားရလဲလို့ မမေးပါလိမ့်နော်....စာနယ်ဇင်းဆိုတာ မြင့်တဲ့လူကျ ကောင်းကောင်းရေး၊ နိမ့်တဲ့လူကျ မကောင်းတာဖေါ်တာလားဟင်??? မီးမသိဘူးနော်...နားလည်းသိပ်မလည်ဘူး...မသိလို့မေးတာပါ။
professional ပီသတာတော့ ကောင်းပါတယ်.... ဒါပေမယ့် လူလူခြင်းထားရှိ ရမယ့် ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ နားလည်မှုတွေ ခေါင်းပါးလွန်းတဲ့ အထိကတော့ မကောင်းပါဘူး... ဒါလူလူခြင်းဆိုတာမမေ့သင့်ဘူးလေ..
ကိုယ်နဲ့ နှိုင်းရင် မရိုင်းပါဘူး...
သူမေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းက ပရိတ်သတ်ကိုရော ဘယ်အတိုင်းတာထိ ကျေးဇူးပြု တဲ့ မေးခွန်းမို့လို့ လဲ... ပြည်သူလူထုအတွက် ဘာမှ အကျိုး မရှိတဲ့ မေးခွန်းပါ....
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သိပ်ကျချင်ရင် ပြောတာပါ...
ငယ်တုန်းက မင်းသမီးတယောက် ရိုက်ကွင်းထဲမှာ မျက်ရည်ကျဘို့ အခက်ခဲ ဖြစ်နေချိန်မှာ ဒါရိုက်တာက ရုတ်တရက် ဘာမပြောညာမပြောပါးရိုက်လိုက်မှ မင်းသမီးက အံ့သြခံပြင်းပြီးမျက်ရည်ကျမှ ရုပ်ရှင် ဆက်ရိုက် နိုင်တယ် ပြီးမှ တမင်လုပ်တာဆိုတာ သိရဘူးတယ်...
ဒါမျိုးလေး လူသာမာန်တို့ မသိနိုင်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ မေးခဲ့ဘူးတဲ့ စာနယ်ဇင်းဆရာမျိုးတွေ ရဲ့ အင်တာဗျူးတွေ ကိုစွဲလန်းခဲ့ဘူးတယ်...
အမှန်ပြောရရင် ခုနောက်ပိုင်း အင်တာဗျူးတွေက ဖတ်လို့ လုံးဝ စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းလို့ အဲဒီစာမျက်နှာတွေကိုကျော်သွားတာ ကြာပါပြီ...
စာအုပ်ဘိုးဈေုး ကြီး ပြီး မတန်ပါဘူး... နှမြောလို့ မ၀ယ်တာကြာပါပြီ...
လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လွန်ကဲစွာ အသုံးချတတ်တဲ့ အကျင့်တွေကို အတွေးခေါ်မြင့်မားသူမည်သူမဆို မနှစ်သက်ပါဘူး....
ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ် သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ
လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့် ရှိတယ်ထင်လို့ပါ ...
မင်းသမီးရဲ့SEX CD ,လက်ထပ်ပြီးမင်းသမီးရဲ့ဇတ်လမ်းတွေ၊)အားလုံးဟာတရားမ၀င်... ပြကွက်တွေဖြစ်လို့ ... စာနယ်ဇင်းတွေ..မေးချင်ရက်နဲ့ ငြိမ်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်... ထက်ထက်မိုးဦးက တော့တရားဝင်..လက်ထပ်..ကွဲကွာ(သတင်းစာတွင်ကြေငြာခြင်းတွေကြောင့် ) မီဒီယာအနေဖြင့် မကြာခဏစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတယ်လို့ မြင်ပါတယ်
စာနယ်ဇင်းက နာမည်ကြီးတွေကလဲ သူတို့တတ်စွမ်းတဲ့ပညာတွေနဲ့ နာမည်တပ်ပီးရှုံ့ချ ကြတယ်...
ဒီချိန်မှာ ထက်ထက်က ဘာလုပ်နေလဲ.. သူတို့ကို တုံ့ပြန်နေလို့လား ... တစ်ယောက်ချင်းကို လိုက်ပါးထပ်ရိုက်နေလို့လား ..
အမှားတူဖြစ်တဲ့ 1 = 1 မှာ စာနယ်ဇင်းတွေဘက်ကအမှားက 1.5 ထပ်ပေါင်းပေးမှ ဖြစ်မယ် ...
to nyi lynn sek,
အလွန် ... ဆိုတာထက်
အမှားလို့ ပြောရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်
ကို ညီလင်းဆက်ရေ ...
နှစ်ယောက်စလုံး ရဲ့ အမှား လို့ ထင်ပါတယ်
ထက်ထက်မိုးဦး ကတော့ ... နာမည်ကျော်
မင်းသမီး မို့ ... နည်းနည်း ထိန်းချုပ်ဖို့
သင့်တယ် ထင်တာပါပဲ ခင်ဗျာ ...